एक माईतिको याचना- ‘मेरी बहिनी बाँच्न चाहन्छे’ - Nepal Page Nepal Page
एक माईतिको याचना- ‘मेरी बहिनी बाँच्न चाहन्छे’
बागलुङ, २३ पुस । मिर्गौला रोगबाट ग्रस्त बहिनीको उपचारमा अर्थाभाव भएपछि दाजुले सहयोगको याचना गरेका छन् । निसीखोला गाउँपालिका-१ का भक्तबहादुर पुनले बहिनी सुशीलाको नयाँ जीवनका लागि सहयोगको हात थापेका छन् ।
डेढ वर्षअघि रोग पहिचान भएपछि बहिनीको उपचारका लागि पाल्पा, भैरहवा हुँदै पोखरासम्मका अस्पतालमा धाएको पुनले सुनाए । सुशीलाको अहिले पोखरास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । शुरुमा पाल्पाको मिसन अस्पतालमा १२ दिनसम्म राखेपछि चिकित्सकले भैरहवाको युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्समा रिफर गरेका थिए । पछि भैरहवामा पनि उपचार सम्भव नभएपछि पोखरा लगिएको पुनले बताए । त्यतिञ्जेलसम्म उपचारमा सवा दुई लाख जति खर्च भइसकेको थियो ।
पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचार थालेको पनि झण्डै एक वर्ष हुन थालेको छ । गत वर्ष फागुनयता मिर्गौलाको नियमित डायलासिस भइरहेको छ । दुवै मिर्गौलाले काम नगरेपछि पेरिटोनियल विधिबाट दैनिक तीन पटक डायलासिस गर्नुपर्छ । डायलासिससहित उपचार र हेरचाहमा अहिले मासिक रु ३० हजार खर्च भइरहेको छ । “आठ लाखभन्दा बढी खर्च भइसक्यो, उपचार धान्नै नसक्ने अवस्था भयो, सामान्य खेतीकिसानी गरेर खाने परिवारलाई गाह्रो हुँदोरहेछ”, पुने भने । उनले डायलासिसका लागि सरकारले दिने छुटबाहेक पनि उपचारमा धेरै खर्च भइरहेको बताए । डायलासिस सेवा निःशुल्क दिने सरकारको नीति छ ।
उनले विपन्न व्यक्तिको उपचारमा स्वतःस्फूर्त सहयोग जुट्नेमा विश्वास व्यक्त गरे । पत्रकार महासङ्घ बागलुङ शाखाका अध्यक्ष दिल शिरीषले स्थानीय तहदेखि राज्यका निकायबाट पनि सहयोग जुटाउन पहल गर्नुपर्ने बताए । सत्र वर्षको उमेरमा विवाह गरेर डेढ वर्ष नहुँदै श्रीमान्सँग अलग्गिनुभएकी सुशीला अहिले माइतीकै संरक्षणमा छन् । रासस
प्रदेशगत बृहत कार्यकर्ता भेला गर्दै दाहाल–नेपाल समूह
काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षले मंगलबार तीन प्रदेशमा बृहत् कार्यकर्ता भेला
खोटाङको हलेसीमा एक महिनामा छ लाख भेटी संकलन
खोटाङ, २३ पुस । महिना दिन नगुग्दै पवित्र धार्मिकस्थल हलेसी मन्दिरमा रु साढे पाँच लाखभन्दा
श्रीमती र बुहारी स्याहार्ने पुरुष !
टीकापुर, २२ पुस । कैलालीको टीकापुर–२ का विनोद कसारा भर्खरै बुबा बनेका छन् । कसराकी
कक्षा ११ का विद्यार्थीलाई अन्योलः सर्वोच्च पेसी सार्दै, विद्यार्थी र शिक्षक फैसला कुर्दै !
इलाम, २२ पुस । पछिल्लो समयमा कुन तहका विद्यार्थीलाई सबैभन्दा बढी तनाव होला भनेर कसैले
महोत्तरीका नागरिकको रेल चढ्ने सपनाः मरिसकेको मन फेरि बौरिन थाल्छ !
महोत्तरी, २१ पुस । जब चाँडै रेल सेवा सञ्चालनमा आउने खबरको चर्चा शुरु हुन्छ महोत्तरीको
मासिँदै छ सुन्तलाः सरकारी क्षेत्रले चासो नदिँदा किसान चिन्तित !
इलाम, २१ पुस । सुन्तलामा अज्ञात रोगले आक्रमण गरेपछि किसान अन्योलमा परेका छन् । रोग
सूर्य चिन्ह पर्खदैं एक समूह !
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक विवाद र कलह केन्द्र, प्रदेश हुँदै स्थानीय तह, वडासम्म पुगेको
नेकपा फुटसँगै एकअर्का पक्षका नेताविरूद्ध कारबाही र पदमुक्त गर्ने होडबाजी !
काठमाडौं, १७ पुष । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि दुई भागमा विभाजित भएको नेकपामा अहिले एकअर्का पक्षका